Dutch Dope mbeu | MyWeedSeeds.com
ChiDutch Dope (inozivikanwa seHolland's Hope) mbeu dzembanje dzakagadzikana uye dzakasimba mbanje dzakayambuka, dzakaberekwa uye dzakagadziridzwa muNetherlands kweanopfuura makore gumi. Anoyambuka yedu Super Skunk mbanje mhodzi yemhando (nekudaro, yake yechinyakare chitarisiko chitarisiko) uye sativa mbanje kubva kuCalifornia. Isu tinokurudzira chiDutch Dope kune varimi vekunze vanove maanovice kana vanoda kusangana nemamiriro ari pasi peakanyanya kunaka. Akanakira kurima munzvimbo dzinotonhora uye munzvimbo dzine mwaka mupfupi wekukura. Iye murefu (ane zvingangoita goho rakakura) uye akasimba, anokwanisa kurwisa tupukanana neforoma. Dutch Dope inofarirwa pakati pevarimi vekutengesa avo vanobhengi pane goho rake rakawanda uye maruva ekutanga maruva. Pakukohwa, chiDutch Dope inogadzira yakakura, yakasimba, yegoridhe-yakasvibira masumbu masumbu akapfuma mune THC gland uye resin. Iye ndiye akakwana "utsi hwezuva nezuva" hwakatsetseka uye hunonakidza kuravira nehurefu hwakanaka uye hwakajeka. Sarudza chiDutch Dope kuti ugone kuita chako chezuva nezuva chiitiko, kana mune rakakura vhoriyamu yemubhedha-kukiya kwehurema hwese-pamusoro pekuzorora.